အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: စောင့်ကြည့်ရမည့်သူတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်"
စောင့်ကြည့်ရမည့်သူတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်"
ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် Foreign Policy အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွင် Su Mon Thazin Aung ရေး သားသည့် The Man to Watch သုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆို ထားသည့် .... ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါး
မြန်မာပြည်သူများသည် သူတို့၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအား စောင့်ကြည့်လေ့ ရှိကြသည် ။ ပြီး ခဲ့သည့် ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်မျှ စစ်တပ်က မြန်မာနိုင်ငံအား အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး မကြာသေးမီကမှ နိုင်ငံရေး အပေါ် လုံးဝဥဿုံ ထိန်းချုပ်မှုများအား လက်လွတ်ပေးလိုက်သည် ကို စဉ်းစား သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ယင်းမှာ အကျိုးအကြောင်း ခိုင်လုံလှသော အလေ့အထတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ယနေ့အထိပင် သုံးနှစ်ကြာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ခဲ့သည့်တိုင် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီး များမှာ သူတို့သာ ဖြစ်နေပေသေးသည်။ ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) မင်းအောင်လှိုင်၏ မိန့်ခွန်း အသေးစိတ်ကိုအပတ်စဉ်ထုတ် စာစောင်တစ်ခုက ဖော်ပြထုတ်ဝေလိုက်သည့်အခါ လူတွေ ထိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေ ကြခြင်းကို အပြစ်တင်ရန် ခက်လှပေလိမ့်မည်။
သူ၏ မိန့် ခွန်းတွင် စစ်တပ်သည် မည်သူကိုမျှ မကြောက်ဟု အခြား အကြောင်းအရာများနှင့် အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ကြေညာခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကများ အကယ်၍ ထိုသတင်း စကားမရခဲ့လျှင် သူက ယခုလိုထပ်ပြောပါသည်။ “မြန်မာ့တပ်မတော်သည် အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ချမှတ်ခဲ့သော မူဝါဒများကိုအမြဲလိုက်နာမည်” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးသန်းရွှေသည် မြန်မာနိုင်ငံအား ၁၉၉၂ မှ ၂၀၁၁ အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ပါလား။
ကာချုပ်သည် ထိုအမှာစကားများကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် အရာရှိများနှင့် တံခါးပိတ်အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့ ဟန်တူပါသည်။ ထိုသတင်းကို အစိုးရ သတင်းစာ များက ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း မပြုခဲ့ပါ။ ထိုပြောကြားချက်များတွင် နိုင်ငံ၌ ဆယ်စုနှစ်များကြာ ကပ်ဆိုး ဆိုက်နေသည့် တအုံနွေးနွေး တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခများ အကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်းမာသည့် အသွင်ဆောင်သော မှတ်ချက်များစွာလည်း ပါသည်။ ထိုအထဲတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် အရင်းအမြစ် မျှဝေရေးများအား တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အား မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်ရှည်ကြာ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အပြစ်တင်ခဲ့သည်။
ထိုပြောကြားချက်များကသာ လူတွေကိုသတိပြုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့် သုံးပတ်ခန့် ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်ကထုတ်ဝေသော ကြေးမုံသတင်းစာတွင် တပ်ချုပ်ကြီး၏ လတ်တလော လှုပ်ရှားမှုများကို မျက်နှာဖုံးအပြည့်သာမက သီးခြား စာမျက်နှာ ၄ မျက်နှာ ပေးကာ ဖော်ပြခဲ့ရာ စာဖတ်သူများအား အံ့အားတသင့်ဖြစ်သွားစေခဲ့သေးသည်။ စစ်တပ်က အာဏာကို သိသိသာသာ ဆက်လက်ကိုင်စွဲနေဆဲဖြစ်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအား မြှောက်ပင့်ရေးသားမှုများမှာ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်လှပါ။
သို့ သော် နောက်ဆုံးရေးသား ထုတ်ဝေမှုတွေကတော့ အာရုံကို ဒက်ထိစိုက်မိသွားစေ ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းတို့ မှာ လူတွေသိအောင် တမင်တကာပေးသော သတင်း အချက်အလက်များ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသတင်းစာတွင် တစ်မျက်နှာအပြည့်ရေးထားသော သတင်းများထဲတွင် တပ်မတော် စစ် တက္ကသိုလ် သင်တန်းဆင်းပွဲတက်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ပုံနှင့်အတူ ဖော်ပြထားသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ အမှာစကားတွင် သူက “နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ သမားရိုးကျ မဟုတ်တဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေရော၊ သမားရိုးကျအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပါ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူက သမားရိုးကျ မဟုတ်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အနက်ဖွင့် ပြောဆိုရာတွင် လူသားလုံခြုံရေး အတွေးအခေါ် အယူအဆကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရှင်းပြ ပြောဆို သွားခဲ့သည်။ လူသားလုံခြုံရေးတွင် စီးပွားရေး၊ အစားအသောက် လုံခြုံစိတ်ချရရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လုံခြုံမှုနှင့် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးများ ပါဝင်ကြောင်း သူက ပြောခဲ့သည်။
အထိမိဆုံးအချက်မှာ စစ်တပ်အာဏာပိုင်ကြီးက "လူသားလုံခြုံရေး" ဆိုသည့် ဝေါဟာရအား အင်္ဂလိပ်လို သုံးနှုန်းသွားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်သည်။ ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ။ ဒီစာကြောင်းတွေဖတ်ပြီး အသုံးတည့်စရာ ဘာတွေသိနိုင်မလဲ။ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) မင်းအောင်လှိုင်၏ မိန့်ခွန်းမှ အနည်းဆုံးတော့ အရေးကြီးကောက်ချက် နှစ်ချက် ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ပထမအချက်မှာ စစ်တပ် ဆိုင်ရာ အယူဝါဒ တည်ဆောက်မှုတွင် အရေးပါလှသော အရွှေ့တစ်ခုရှိနေခြင်းကို ညွှန်းဆို ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုမှာ တပ်မတော်၏ ဦးဆောင်မှုဟန်ပန် (စတိုင်) ကြီးမားစွာ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာတပ်ချုပ်သည် လာမည့် ၂၀၁၅ တွင် ကျင်းပရန်ရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲ၌ သမ္မတအဖြစ် နိုင်ငံရေးထဲ ဝင်လာဖွယ် ရှိနေသည်ဆိုခြင်းကို သူ့မိန့်ခွန်းက သိသာထင်ရှားလှစွာ ပြဆိုနေခြင်းပဲ ဖြစ်လေသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်အတွင်း စစ်တပ်သည် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို အခြေခံသောသဘောတရားကို ကျင့်သုံး လိုက်နာ ခဲ့သည်။ ထိုသဘောတရားများကို အခြေခံကာ တပ်မတော်သည် လုံးဝဥဿုံ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး အယူဝါဒကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းတို့အထဲတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေလည်း ပါဝင်သည်။ ယင်းသည် တပ်မတော်သမိုင်းတွင် တတိယ အဆင့် အယူဝါဒ တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သည် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပထမ အယူဝါဒ နှင့် ၁၉၅၈ တွင် ဒုတိယအယူဝါဒကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက် တချို့ပြောင်းလဲမှုပြုစဉ်မှာပင် သဘောတရားရေးအစီအစဉ်တွင် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး ဗဟိုပြုသည့် အချက်သုံးချက်အားလုံးကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ တပ်မတော်သည် ထိုဝါဒသဘောတရားကို အလွန်လေးနက်စွာပင် ခံယူကျင့်သုံးခဲ့သည်ကို အတွေ့အကြုံများက ပြသနေပေသည်။
အဆိုပါ ၀ါဒရေးရာ လမ်းညွှန်ချက်များအား ပြည်သူလူထုအပေါ် လျှို့ဝှက်ထားသော်လည်း (၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအထိ) စစ်တပ်သည် တပ်နှင့် အရပ်ဆက်ဆံရေးနှင့် အရပ်သား နိုင်ငံရေးများတွင် ကြားဝင်ရေးများတွင် ယင်းတို့ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန် နှစ်များတွင် ၀ါဒရေးရာ တည်ဆောက်သည့်အခါ ဥပမာအားဖြင့် တပ်မတော်သည် သူ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ကာကွယ်ရေးမှ ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးအထိ တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်သည် ထိုသဘောတရားရေးများကို လက်တွေ့ဆက်လက် ကျင့်သုံး ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၅၈ မှစကာ နှစ်နှစ်ကြာ နိုင်ငံအာဏာကို ရယူခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှောင်း ပိုင်းတွင် စစ်တပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ခဲ့သည်။
စစ်တပ်သည် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အမည်နာမတပ်ကာ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ နှင့် ၁၉၈၈ တို့တွင် အာဏာသိမ်းခဲ့သည်။ ဆက်လက်ဆက်ခံကြသော စစ်အစိုးရများက စီးပွားရေးတွင် ပြည်တွင်း ဖူလုံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွင် မိမိကိုယ်မိမိ အထီးကျန်စေမှုတို့ အကျိုးအကြောင်း ပြသ နိုင်ရန် အဆိုပါ သဘောတရားရေးရာများကိုပဲ ဆက်လက်ကိုင်စွဲ ခဲ့ကြသည်။ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်များနေရာတွင် စစ်အသုံးစရိတ်ကို တိုးချဲ့ခဲ့ခြင်းများကို တရားဝင် ဖြစ်စေရန်အတွက် သူတို့က နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုသည်ကို အကြောင်းပြခဲ့ကြ သည်။
စစ်တပ်သည် လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ဆည်များနှင့် တောနက်ကြီး ထဲတွင် မြို့တော် အသစ် ကိုပင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်မ၏ ပညာရေး သင်တန်းအတွက် ကျွန်မ အင်တာဗျူး ခဲ့သည့် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များမှာ ပြည်သူလူထုတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူမှုစောင့်ရှောက်ရေး စသည့် မတူခြားနားသော ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရှိနေကြသည် ဆိုခြင်းကို ရှင်းလင်းစွာသတိပြုမိကြလင့်ကစား နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးက ထိပ်တန်း အရေးကြီး လှကြောင်း အလေးပေးပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အမြင်တိမ်သူများ၊ ပေါ်ပြူလစ်များဟူသော အမြင်ကို စစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်များက ပယ်ချခဲ့ကြသည်။
သမိုင်းနှင့် ဆက်စပ်လျှင် လူသားလုံခြုံရေး ဆိုသည့်အပေါ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ထွေးပွေ့လိုက်ခြင်းမှာ သူတို့သည် စံသတ် မှတ်ချက်များမှ သိသာစွာ ခွဲထွက်လာခြင်းကို ညွှန်းဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။
သူ၏ ကြေညာပြောဆိုချက်များကို လေးလေးနက်နက်သာ ခံယူကြည့်ပါက စစ်တပ်သည် သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူမှုစောင့်ရှောက်ရေး တို့အတွက် အကာအကွယ်ပေးသူ အဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူတို့၏ အသည်းနှလုံးနှင့် စိတ်များအပေါ် ရယူ ဖို့ကြိုးပမ်းလာမှုအဖြစ် ယင်းတို့က ညွှန်ပြနေပေသည်။
တပ်ချုပ် အနေနှင့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရွေးခံနိုင်ဖွယ်ရော ဘယ်လိုရှိပါသနည်း။
စစ်တပ်တွင်းရှိ သတင်းအရင်းအမြစ်များစွာ၏ အဆိုအရ ထိုနှစ်တွင် သက်ပြည့် ပင်စင်ယူ ရမည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် သမ္မတဝင်ရွေးခံရန် တိတ်တဆိတ် ပြင်ဆင်နေ သည်ဟု သိရသည်။ စစ်တပ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တချို့ကလည်း ၂၀၁၅ တွင် စစ်တပ်က သူ့အား သမ္မတလောင်းအဖြစ် အဆိုပြုလိမ့်မည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ယခု ကိစ္စတွင် လူသားလုံခြုံရေးဆိုသည့် သူ၏ အာစလျှာစသည် ပြည်သူတို့၏ ပြင်းပြသော ဆန္ဒနှင့် အတူ ဟိန်းမြည်လာလိမ့်မည်။ ရှင်းလင်း ပြတ်သားသော နိုင်ငံရေးအမြင်နှင့်အတူ သူ့ကိုယ်သူ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် (စတိတ်မင်း) အဖြစ် ပြသပေလိမ့်မည်။ လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပါလီမန် (လွှတ်တော်) ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အပါအဝင် တခြားသော အင်အား ပြင်းထန်လှသည့် ယှဉ်ပြိုင်ဖက်များအပေါ် သူ့အနေဖြင့် ကောင်းစွာ အမြတ်ထုတ် နိုင်စွမ်းပေလိမ့်မည်။ လာမည့်လများအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အနေဖြင့် ဘာတွေ လုပ်မည်ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး စောင့်ကြည့်သူများက အနီးကပ် အာရုံစိုက် လေ့လာကြည့်ရှုနေကြမည်မှာ အတော့်ကို သေချာသလောက် ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။
. — with Nld Central and 29 others.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 12:52 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook